होटलको ‘स्पेशल डिस्’ बन्यो सलह - Pura Samachar
प्रकाशित: July 28, 2020
बाग्लुङ गल्कोट वडा नम्बर ६ की २० वर्षीया संगीता बस्नेत आजभोलि दिनभरी सलह बटुल्छिन् । गाउँमा आएको सलह बटुलेर फाल्ने होइन, समातेको सलह होटलमा लगेर बेच्छिन् ।
संगीतासँगै अन्य बालबालिकाहरुको पनि विगत चारदिनदेखि खेतबारीमा छपक्कै बसेका बसेका सलहलाई प्लाष्टिकका डिब्बा, फेन्टा र कोक, स्प्राइटका बोतलमा जम्मा गर्ने र बिक्री गर्ने दैनिकी बनेको छ ।
एक साताअघि बाग्लुङ आएको सहलको झुण्डमध्ये केही सहल गलकोटा पाखामै रुमल्लिएका छन् । झण्डै एक सातादेखि आएको सलहले बालीनालीमा नोक्सानी पुर्याइरहेको छ ।
सलह धपाउन स्थानीय किसानले धुवाँ बाल्ने, टिन ठटाउने गरिरहेका छन् भने केहीलाई सलह आम्दानीको स्रोत बनेको छ ।
सहल प्रतिबोतल २० रुपैयाँदेखि ५० रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको बस्नेतले बताइन् । अनि, होटल रेष्टुरेन्टमा भने फ्राइ गरेर तयार पारेको सलहको परिकारलाई प्रतिप्लेट २ सयदेखि ३ सय ५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्ने गरेको स्थानीय पत्रकार घनश्याम गौतमले बताए ।
सलह बन्यो स्पेशल परिकार
गल्कोटको मुल्य व्यापारिक केन्द्र मानिने गल्कोटमा होटल व्यवसायीहरुले सलहको स्पेशल परिकार बनाउने गरेका छन् ।
सलहको फ्राइ सलह, सलह करी, सलह चिल्ली जस्ता परिकार बनाउने गरिएको स्थानीय होटल व्यवसायी सागर खत्रीले बताए । अहिले गल्कोटका होटलमा सलहको परिकार ‘स्पेशल डिस्क’ बनेको उनले बताए ।
वर्षा भइरहँदा सलहले ठाउँ छाडेन
नियमित भइरहेको वर्षाका कारण सलह ठाउँ नछाडेको गल्कोट नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख हरीदत्त सुवेदीले बताए ।
‘केही दिनदेखि वर्षा भइरहेको छ’, सुवेदीले भने,‘तीन चार घण्टा घाम लागेपछि मात्रै बाली नाली खाएर सलह आकाशिन्छ ।’
पानी पर्दा भने सलह बालीनालीमा बसेपनि नोक्सान नगरेको उनले बताए । स्थानीयकाअनुसार लाखौंको संख्यामा रहेको सलहको बथान गल्कोटको वडा नम्बर ६, ७ र १० मा बढी देखिएको छ ।
गलकोटमा निकै बाक्लो मात्रामा भित्रिएको सलहले मकै, कोदो तथा तरकारी बालीमा नोक्सान पुर्याएको छ । कृषि शाखा प्रमुख सुवेदीकाअनुसार एक साताअघि बाग्लुङमा भित्रिएको सहल पानी परेकाबेला व्यवसायीक तरकारी खेति गरेको ठाउँमा जालीभित्र तर घर भित्रै छिरेर बसेको छ ।
तराइबाट आएको सलह शुरुमा बाग्लुङको तारखोलामा बसेको थियो । त्यसपछि सलहको समूह विभिन्न ठाउँमा फैलिएको सुवेदीले बताए । धुवा बाल्ने, थाल तथा टिन ठटाउने गर्दा पनि सलह नभागेको सुवेदीले बताए । उनकाअनुसार सलहले पुर्याएको क्षतिबारेमा तथ्याङ्क संकलन भइसकेको छैन ।
दक्षिणबाट उत्तरतिर हावा बहँदा भारतबाट भित्रिएको सलह बुटवल हुँदै बाग्लुङतर्फ लागेको थियो ।
कस्तो होला अबको काठमाडौं उपत्यकाभित्रको निषेधाज्ञा? हेरफेर होला मोडालिटी?
नागरिक समाजको मार्च पास शीतल निवासमा